Free na Mepee Bochum ngwanrọ Software: Kacha mma maka 2020 | Site na Linux
Free na Mepee Bochum Ngwanrọ Software: Kacha mma maka 2020
Na nke anyị gara aga post banyere Meghee Hub, anyị kwuru na ha bụ Saịtị Ngwanrọ Software, na anyị kwuru banyere ụfọdụ n'ime ha, karịsịa raara nye Free Software na Open Source. Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na Saịtị Ngwanrọ Software (Koodu Bochum) bara uru maka obodo anyị, ọkachasị n’oge afọ 2020.
Ọtụtụ mgbe, na dị ka ọ dị na mbụ, ezigbo akụkụ nke ndị mmepe na ndị ọrụ dị elu ma ọ bụ, nke Free Software na Open Source, mara ma jiri ụfọdụ n'ime ndị a Saịtị Ngwanrọ Software, ma nke bu eziokwu bu na otutu uzo di obere ka odi ma odi nma ka amara ha nile.
Dị ka anyị kọwara na post ahụ e kwuru n'elu, Saịtị Ngwanrọ Sọftụwia bụ:
" … Ngalaba weebụ na-akwado ma ọ bụ na-enye koodu nchịkọta ngwá ọrụ, iji mee ihe dị ka njikwa mbipute. N'ụzọ dị otú a, ikwe ka ndị mmepe rụọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ọrụ. N'ime saịtị ndị a, maka Free Software na Open Source, enwere ọtụtụ saịtị ndị GitHub pụtara, ... ".
2 Ebe nrụọrụ Bochum Ngwanrọ Na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ Open
2.1 Free, Mepee na Onwe
2.1.2 Agwa agwa
2.1.7 Ndị ọzọ mara
Maka GitHub bụ otu n'ime ndị kasị mma mara, anyị ga-egosi obere ndepụta nke Saịtị Ngwanrọ Software, ma n'efu, n'efu na imeghe, na azụmahịa, nke nwere ike ịbụ nhọrọ bara uru ma bara uru iji dochie anya ya GitHub.
Nke a bụ n'ihi GitHub, n'agbanyeghị ịbụ a usoro mmepe online dị ike ma dị nchebe, yana ewu ewu maka ịnwekọta ngwanrọ ngwanrọ, na-eji Git dị ka usoro nchịkwa nsụgharị, na inye nnabata (ebe nchekwa) na oru mmeghe, na sọftụwia nkeonwe (nke onwe na / ma ọ bụ nke azụmahịa), ebe ọ bụ na ọ nwetara ya Microsoft, ọtụtụ mmadụ ezerela iji ya ma kwaga na nyiwe ndị ọzọ.
Ya mere, Saịtị Ngwanrọ Software na-esonụ bụ ezigbo ihe ọzọ na GitHub ulo ulo oghere ọrụ emeghe (s) ndị dị mkpa.
Ebe nrụọrụ Bochum Ngwanrọ Na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ Open
Free, Mepee na Onwe
Ọ bụ mmeghe mmeghe nke ngwanrọ ngwanrọ, ebe nrụọrụ weebụ na-ejikwa ebe nchekwa koodu isi, akụkọ ahụhụ, mkparịta ụka, peeji nke wiki, blọọgụ, na ọtụtụ maka ọrụ ọ bụla. Njirimara njikwa koodu isi nyere gị ohere ịrụ ọrụ na Git na SVN. Na mgbakwunye, ọ na-agbakwunye arịrịọ, ndụdụ, na arụmọrụ ndị ọzọ. Ọ na-enye ndepụta nzipu ozi ma ọ bụ nzukọ ma ọ bụ ụzọ abụọ ejikọtara iji mepee mkparịta ụka ma nwee sistemụ nsuso ahụhụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụ weebụsaịtị nke na-enye ọrụ zuru ezu maka ide, nyocha, na itinye koodu. Ya mere, ọ bụ ihe magburu onwe, nchekwa, ike na ntụkwasị obi ọzọ na GitHub. Ọ na - eme ka ijikwa ebe nchekwa koodu dị mfe, ebe enyere ya iji melite arụmọrụ mmepe. Ihe omume ya pụtara ìhè gụnyere inye nkwado maka nnabata site na Git na SVN, ịhazi nhazi ọnọdụ maka gburugburu ọ bụla, na ikwe ka ụdị nzaghachi abụọ dị n'etiti ndị sonyere, isiokwu, na mkparịta ụka.
Ọ bụ usoro mmepe siri ike, zuru ezu, enwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ndị otu ọkachamara. Ebe ndị ọrụ agụmakwụkwọ na ndị mmepe nke ọrụ mmeghe na-enweta ego na-akwụghị ụgwọ. Ọ na - enye gị ohere ibubata ebe nchekwa GitHub na usoro 6 dị mfe, ọ na - akwado njikọta nke ndị ọzọ. Ọ nwere atụmatụ ndị ama ama dị ka, pipbucket pipelines, nyocha koodu, arịrịọ arịrịọ, ụdị ndenye mgbanwe, echiche dị iche, nghọta dị mma, nsuso mbipụta, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe na-emeghe, nke siri ike, nke dị nchebe, nke ọma, njiri mara mma na nke siri ike maka ijikwa mmepe ngwanrọ na usoro ndụ. Nye ọtụtụ ndị, nke a bụ nọmba ọnụọgụ abụọ na GitHub, n'ihi na ọ na-akwado akara ndị otu, nsuso nsuso, nhazi esemokwu na esemokwu otu, mmegharị nke nsogbu n'etiti ọrụ na ndị ọzọ. Ọ na-akwado nsuso oge, ngwa ọrụ dị ike, na ngalaba na mkpado echedoro, n'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ebe a na-akwụghị ụgwọ ma mara nke ọma maka iwu, ijikwa na imekọ ihe na ngwanrọ ngwanrọ, nke Canonical wuru, ndị okike Ubuntu Linux. O nwere atụmatụ dị ka koodu ntinye, Ubuntu ngwugwu ngwugwu, na nchịkọta nchịkọta nsuso, nyocha nyocha, ndepụta nzipu ozi, na nyocha nsuso. Na mgbakwunye, Launchpad na-akwado ntụgharị asụsụ, azịza nsuso, na ajụjụ a na-ajụkarị.
Ọ bụ oghere ngwanrọ na-emepe emepe na ngwanrọ na-ekesa ihe ngwanrọ wuru iji kwado ndị ọrụ mmemme emeghe. A na-akwado ya na ikpo okwu Apache Allura, ma na-akwado ọnụọgụ ọ bụla nke ọrụ ọ bụla. Kedu ihe kpatara ya, a na-ahụta ya dị ka akụ na ụba obodo na-emepe emepe nke bara uru bara uru maka inyere ndị ọrụ mmeghe ụzọ aka ịga nke ọma dị ka o kwere mee. Nnukwu ikike ọ nwere ugbu a nwere atụmatụ karịa ọrụ 430.000; Ndị ọrụ ndebanye aha nde mmadụ 3,7, nde mmadụ nde 35 kwa ụbọchị na ihe karịrị nde 4,5 na nbudata ngwanrọ kwa ụbọchị.
Ndị ọzọ mara
Onye na-arụ ọrụ
Sourcegwé ojii Isi Iyi
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a bara uru na ndị bara uru «Sitios de Alojamiento de Software Libre y Abierto» nke na-enye ọtụtụ ohere ịzụlite, tinye aka ma ọ bụ rụkọta ọrụ, iji mepụta usoro okike nke sọftụwia anyị ugbu a ma na-eto eto, nwere nnukwu mmasị na uru ọ bara, maka dum «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Free na Mepee Bochum Ngwanrọ Software: Kacha mma maka 2020
GameHub: Ọbá akwụkwọ dị n'otu maka egwuregwu anyị niile
Mepee Hub: Ezigbo saịtị iji chọpụta, soro ma tulee oghere mepere emepe